Site na Linux nwere ihe karịrị 100 000 ọbịbịa | Site na Linux
Site na Linux enweela ihe karịrị 100 nleta
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Noticias, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Obi dị anyị ụtọ ịkọrọ gị ụfọdụ ọnụ ọgụgụ anyị wee si otú a gwa gị taa <° Linux gafere 100 000 nleta na Ọnwa 5 na anyị na-ebu n'onlinentanet.
Ọ bụghị n'ezie ọnụọgụ dị oke mkpa, mana na-echebara oge arụghị ọrụ anyị mere n'August, nakwa na anyị ka dị obere, anyị na-ahụ ọnụ ọgụgụ a na-agba ume.
Ebumnuche anyị abụghị ịsọmpi na saịtị ọ bụla. Naanị anyị chọrọ ịnye gị ihe ọmụma anyị site na blọọgụ a ma gbanwe ahụmịhe anyị niile, na -emepụta oghere maka mgbanwe.
Anyị chọrọ ikele ndị niile na-agụ anyị kwa ụbọchị ma na-eso anyị. N'ụzọ ụfọdụ anyị chere na ha bụ akụkụ dị oke mkpa nke <° Linux. Daalụ nke ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Site na Linux enweela ihe karịrị 100 nleta
Ihe 35 kwuru, hapụ nke gị
Ekele maka nleta 1 × 10 ^ 5 🙂
Ekele enyi, obi uto igu gi ebe a 😀
Blog ga-abụ nwata, obughi gi HAHAHA.
Ọ bụ blog na-emelite na-aga n'ihu na nke ahụ na-eme ka ọ ghara ile mmadụ anya n'ihu, nke bụ ihe nzuzo maka ịde blọgụ na-arụ ọrụ
Ma gini ka nwatakiri a na-ekwu? Na ebe anyị niile bụ nwa okorobịa .. All ...
Ndị na-eto eto niile nọ na blọọgụ a ka ha gaa n'ihu ... gbasie ike ịnọ ebe ị nọ. HAHAHAJAJAJAJA.
HAHAHAHAHAHA otu m si chịrị ọchị na HAHAHAHAHA a.
Elav dị afọ iri atọ na abụọ mana bịakwa, ọ bụghị agadi nwoke ma ọ bụ HAHAHA
Hahahaha afọ iri atọ na abụọ you bụ onye nzuzu? Yabụ na ọ bụrụ na m bụ 32 ị bụ 32 Ọ naghị adabara gị? LOL
Only so naanị afọ 1 tọọ m? mba fuck ... WTF !!!
Ka anyị hụ, ịhapụ njakịrị ugbu a, Abụ m 21 (Abụ m 22 ugbu a na November 20), ị bụ 23 ma ọ bụ 24?
Hahaha mana m bụ naanị 24 .. M tọrọ karịa ole na ole na-agụ ...
Ee ee, a bụ m afọ 29. Ọ dị m ka m emeela agadi n’akụkụ gị.
Ma hey, achọrọ m idegara Elav na Gaara akwụkwọ a:
Ekelere m gị. Obi dị m ezigbo ụtọ na m bịara ebe nrụọrụ a iji mụta ihe ọhụrụ, iji chọpụta ụfọdụ akụkọ na, karịa ihe niile, ọ masịrị m na ụdị edemede gị dị oke mma. Ọ dị mma ijide ederede gị mmụọ nke ịkekọrịta na izi ihe n'ụzọ kachasị mma ihe na-eme na ụwa Linux na otu esi eme usoro dị iche iche. Ana m ekwu nke a n'ihi na enwere ndị ọzọ kwenyere na ha "dị oke", mana echiche ha nwere mmasi, ụfọdụ nwere obi ọjọọ, ndị ọzọ na-egosi ihe dị iche na eziokwu, nke ọma, ọbụnadị ikwu maka ndị ahụ.
Were obi ike n'ọrụ a. Enwere m obi ụtọ na oge ọ bụla m bịara, e nweelarị ọtụtụ isiokwu ọhụụ. Ah, ihe ọzọ masịrị m bụ ezigbo vibes dị n'etiti unu. Obi ike adịghịkwa, dịka mgbe niile na nkọwa ya na-eme ka m chịa ọchị. Ugbu a na m na-eche maka afọ, ọbụnadị Obi ike nwere ike ịbụ nwa m, ha ha ha.
Ọ dị mma, daalụ wee banye n'ọrụ ahụ. Cheers!
wow daalụ nke ukwuu maka okwu a, ị ga - ahụ na ọ bụ eziokwu dịka o kwere mee, daalụ enyi.
ezi vibes? haha ... Aga m eme akụkọ ahụ nwa oge 😉
elav na m zutere afọ ole na ole gara aga, ya na ya gụrụ akwụkwọ n'otu ụlọ akwụkwọ, mana anyị ahụtabeghị. Mgbe m bidoro Linux ọ nyere m aka na sava na ụfọdụ ihe ndị ọzọ, mana mgbe m bidoro inweta "njirimara nke m", ọfụma ... ka anyị sị na m bụ onye na-emegide debian, pro-ubuntu na dịka elav Ọ bụ ihe na-abụghị, anyị na-esekarị okwu ma na-akwa njakịrị (anyị ka na-eme ya LOL) mana m na-eme ka o doo anya, ihe niile dị mma mgbe niile 😀
N'oge ahụ amalitere m ịmụ aghụghọ, na abụ m ụdị onye na-enwe mmasị ịkọrọ, yabụ m mepụtara blog iji tinye ahụmịhe m n'ụwa Linux: http://kzkggaara.wordpress.com
Elav nwere nke yahttp://elavdeveloper.wordpress.com) na haha, mma ... ọ na-enwekarị nleta karịa m, n'ihi na dịka ị pụrụ ịhụ, ọ na-etinye oge ka ukwuu ide ihe karịa m (naanị lee ọnụọgụ edemede nke ọ bipụtara HAHA). Nke a bụ ihe ọzọ kpatara njakịrị, njakịrị, okwu njakịrị na ihe ọ bụla iji gbalịa ịkụ m LOL !!!
Oge gafere ma nye anyị ohere ịnweta ngalaba na saịtị nke anyị (otu puku obi sitere n'obi Renata y Gabriela, admins nke http://artescritorio.comHa emeela ihe a niile ị hụrụ na ọ ga-ekwe omume, anyị ga-enwe obi ekele ebighi ebi) ma lee ya 🙂
¿obi ike? ... onye Galician a nwere ezigbo fleas pụtara mgbe mụ na elav anyị dere na na blọọgụ anyị, anyị chọpụtara na ọ bụ ihe ọchị obi ike ọ bipụtara na blog ya, juputara na mkparị, mmejọ na ụzọ dị mma iji kwụsị nrụgide: Akatọ Ubuntu Lol !!!
elav na o nwere obere nghotahie, mana nke ahụ bụ ebe ezigbo vibes ahụ bilitere na dịka ị na-ekwu, anyị nwere n'etiti anyị atọ.
Ozugbo ọ dị adị <° Linux, anyị na-ekwupụta ya n'ihu ọha obi ike dị ka anyị Official Troll No.1 haha.
Enweghị Eduar 2, Onye ọrụ anyị Troll No.2, onye na-egosipụtabeghị taa ... m ga-ewepu ụbọchị site na ụgwọ ọnwa ya HAHA.
Ma a ka nwere ọtụtụ ide ... anyị anọghị naanị anyị elav na abum ndi protagonists nke a, gi onwe gi kwa ... n'eziokwu, enwere m olile anya inye ihe ijuanya n'oge na adighi anya 😀
Uff… M kwuru na ọ ga-adị mkpụmkpụ HAHAHAHAHAHA !!!!!
Ọfọn, m mepere blọgụ ahụ iji hụ ma ọ bụrụ na otu a, m ga - ewere nwanyị (ọ dịghị mma?) Site n'isi m hahaha. Ma ọ bụghị naanị ịkatọ Ubuntu, mana Apple, Gibson na Dofus hahahaha.
Na ubochi a na akpo Spain Galicia, inwere ikike iji okwu ahu megide ndi ayi na abughi ndi Galicians hahahahahaha
Ihe dọọrọ uche m bụ ihe "na - eme ka ọ bụrụ na anaghị ele mmadụ anya n'ihu" ... olee otu anyị si eme?
Ekwenyere m na eleghị mmadụ anya n'ihu kpam kpam agaghị ekwe omume ma ọ bụ ọ gaghị ekwe omume ịnweta
Ee, ama m, mana ihe ikwuru dị ka:
«Ha na-ekwu na-anaghị ele mmadụ anya n’ihu mana ha bụ ndị na - akwado X distro na ha na - akwado ya wdg wdg» LOL !!!
mmm mgbe m kwusịrị nke a, a na-efu efu nke ga-ekwu ihe dịka: <° Ubuntu ma ọ bụ ihe dịka HAHA
Gị na elav nwere obere obi ha, ka m na-emehie? hehehehehehe.
Ekele anyị na anyị na-aga maka nde nleta.
Uff… million… nke na-ada ka ihe ukwu hehe .. Ọ D IT M !!! 😀😀
Ọ bụrụ na achọghị m nnukwu ihe, ọ nweghị nke ọ ga-aba uru.
N'ezie, otu puku ekele gị niile ... site na ala nke obi m na inwe ezi obi karịa mgbe ọ bụla, puku kwuru puku ekele gị niile, bụ ihe kpatara blog a, ọdịnaya ya na ọrụ anyị ebe a. T_T
Ma otu esi enweta mmụọ .. look dị ka nwa agbọghọ: KWES LRI NWA PUSSY Nwoke hahahaha
Obi dị m ụtọ maka akụkọ a.
Daalụ maka ịkwụsị na ịza ajụjụ, ịgụ maka anyị na ị forụrị ọ withụ na akụkọ 🙂
Ezitere November 17, 2011 na 3:33 PM
Ebe ọ bụ na ọ nọghị ya n’ihu, ọ bụrụ na ọ garaghị amakụ ya ruo mgbe ọ na-enweghị ike
Ọbụghị ọchị JAJAJAJAJAJA !!!!!
Ọ dị mma, ọ dị mma, ọ bụ ọmarịcha blọọgụ ma ọ ghọrọ ọkacha mmasị m mgbe m kwagara Linux, ọ na-enwe ezigbo isiokwu yana ezigbo ndụmọdụ. Enwere m olileanya na ha ga-aga n'ihu otu a, daalụ maka ịkọrọ anyị ahụmịhe gị.
Ibe ọkacha mmasị gị? Sọpụrụ na ị na-emere anyị 😀
Dịka m kwuru na mbụ, anyị na-emewanyewanyewanye ma na-agbanwe agbanwe, anyị chọrọ ọchichị na ihe ọ bụla, anyị ga-eto nke ukwuu na onye na-eweta WebHosting ga-adọpụ ntị anyị n'ọtụtụ okporo ụzọ na anyị ga-ewepụta HAHAHAHA
Olileanya. Ekele na ekele si Mexico.
Nke a bụ freak xD
100 000 bụ otu na 10 zụlitere na 5 -> Ebe 10 dị na ọnụọgụ abụọ bụ ntụpọ 2, ọ bụkwa naanị ọnụọgụ ndị na-arụ ọrụ ebe a xD. Na 5 ga-abụ ihe nnọchiteanya nke ọnwa ndụ nke blog Haha
Ka emechara nke ahụ, ọ dịghị ihe ọ bụla, ekele ma gaa n'ihu karịa 😛
HAHAHAHAHA nnukwu geek HAHAHAHA n'ezie,
naanị ... nke ọma, maka ugbu a agaghị m ekwu maka nkọwa, ọ bụrụ na mmadụ achọpụta na ọ dị ukwuu, mana m na-ahọrọ ịghara ikwu ihe ọ bụla ruo mgbe ihe ijuanya ahụ ghọtara hehe 🙂
Naanị chere na m (na echere m na ọ dịkwa) m bụ onye nwere oke ọchịchọ, ya bụ, amaara m na <Celsius Linux nwere ikike, achọrọ m (anyị chọrọ) iwere ya n'elu, maka nke ahụ, anyị ga-ewepụta ma meziwanye onwe anyị mgbe niile. anyị malitere ime na, anyị anọghị naanị 😉
Ọfọn, ebe ọ dị, m na-abanye ihe dị ka ugboro 4 n'ụbọchị ọ ga-aga n'ihu.
Ekele na Ekele, gaa n'ihu.
Daalụ mgbe ahụ maka ịgụ na ịza ajụjụ, anyị chọrọ ịnọgide na-emeziwanye ... ihe niile bụ maka ndị na - agụ akwụkwọ anyị 😀
Echere m na ha kwesịrị itinye akara mgbochi.
Yup eleghị anya ị bụ eziokwu haha, ihe na-eme bụ na m ka na-ahụbeghị ihe ọ bụla na-amasị m ezu 🙂
Ekele maka nleta ndị ahụ 100 m na maka ịme ya obi ụtọ na ịkekọrịta ozi na blog a, nke ga-enwetakwu ndị na-eso ụzọ maka ụdị edemede na ịza ajụjụ ya pụrụ iche, ịmakụ ndị niile sonyere na Zacatecas, Zac. Mexico ma ga n'ihu n'ọrụ a.
HAHAHA o doro anya na onye ọ bụla nwere mmasị na ụzọ anyị si ede ihe, ọ bụghị "oke" ma ọ bụ "iwu" dị ka na blọọgụ / saịtị ndị ọzọ, echegbula na anyị agaghị agbanwe hahahaha.
Ekele na ekele maka ịkwụsị site na ịza ajụjụ 😀
blọọgụ dị mma ma ikuku dị mma, tupu ọkacha mmasị m bụ UL ma taa <° linux nwere oghere pụrụ iche na ibe m.
Ekele, jisie ike na ịga n'ihu.
Ekele diri unu abuo.
Ekwenyere m n'ezie na ha na-arụ ezigbo ọrụ na blọọgụ a, na, karịa ihe niile, ọ dị m ka ha na-eme ya n'eziokwu, na-etinye (ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ịhapụ) echiche nke ịdị n'otu na nkwukọrịta, megide ụdị ọ bụla nke naanị mmasị mmadụ.
Enwere m ekele maka mbọ na nraranye nke ọtụtụ ndị na-ede blọgụ, ndị na-ede blọgụ na ndị na-ekwu okwu na Linux ụwa na, n'ụzọ doro anya, enwere m obi ekele maka ihe m nwee ike ịmụta site n'ịgụ ha niile. Ma enwere blog (linuxero), nke kwụsịrị ịdị afọ ole na ole gara aga, na m na-echeta ọ bụghị naanị maka ogo nke isiokwu ya (ma ọ bụ post), kamakwa maka ùgwù ya, ntinye na ịdị n'otu (enwere m ike ịsị: enweghị mmasị) nke gosipụtara; Echere m na blog "Entretuxesypingüinos" nke ụfọdụ (utu aha) Ceec. Ma ọ bụrụ na m kpọtụrụ ya, ọ bụ n'ihi na mgbe ụfọdụ ọ na-enye m echiche na gị, n'ụzọ dị iche, kamakwa n'eziokwu, jiri blọọgụ ahụ wulite blọgụ gị. Enwere m olileanya na anaghị m emehie, heh.